Tsy misy afa-tsy ny mpitandro ny filaminana no afaka mitazona izany ary tsy vitan’izay aza fa mbola nalatsak’izy ireo teo koa ny bala ambiny izay tsy mbola nampiasaina ary misy laharana. Raha tena alefa lavitra ny fanadihadiana dia tsy maintsy fantatra ny toby nivoahan’ireo fitaovam-piadiana ireo sy ny olona nitazona izany tamin’io andro nanafihana io. Matetika anefa ny lehiben’ny mpitandro ny filaminana no minia mikipy sao ho lasa ady eo amin’ny samy vondron’ny mpitandro ny filaminana, ary dia vitavita foana ny raharaha.
Nandamoka ny fikasan’i Andry Rajoelina nitodika tany amin’ny kaompania Arabo Qatar-Airways mba hahafahana manajanona haingana ny fifanarahana amin’ny kaompania Renioney Air Austral. Efa ratsy loatra ny lazan’ny fitondrana malagasy amin’ny tsy fahamatorana eo amin’ny fifanaraham-piaraha-miasa, toy izay itorian’ny Air France ny kaompaniam-pirenena amin’izao fotoana. Efa mailo ny kaompania maneran-tany ary dia tsy nisy vokany ny dian’ny irak’i Andry Rajoelina tany Doha farany teo.
MANALA AZY NANGATSIAKA
Nangatsiaka ny hetsika manala azy vita bakalorea. Endrika iray izany manaporofo fa kivy ny mpianatra amin’ny zavatra nanjo azy ireo. Very ny 11 volana izay nikirizana tany an-tsekoly kanefa noho ny hetraketraky ny fitondrana tsy mahay ny asany dia mikorotan-tsaina ny mpiadina ary tsy afaka ny namoaka ny tena fahaizany noho ny zava-misy noho ny laza adina nivoaka mialoha ny fotoana, ny fanadinana natao tao anatin’ny alin’ny haizim-pito sy ny sisa koa. Famotehana tanteraka ny fanabeazana ny zava-misy ankehitriny.
NIJORO HO VAVOLOMBELONA
Taorian’ny fandisoana ny vaovao navoakan’ny gazety an-tsoratra L’express de Madagascar avy amin’ny fitondrana dia vao mainka koa niroborobo ny olona izay nijoro ho vavolombelona. Nanamafy izy ireo tamin’ny nanaovan’ny polisin’ny PAF azy teo amin’ny seranam-piaramanidina dia ny fanasarotana ny fandehanana izany avy amin’ny fitadiavana taratasy lavareny. Tsy voatery ho any amin’ny tany Arabo no nandehanana fa noraisina an-tendrony ny fampiharana ny tapaky ny filankevitry ny minisitra ary dia maro ireo izay ahiahiana fotsiny dia nilàna vaniny, raha araka ny fanazavan’ireo niharan’izany.
# Mila amboarina ny arofenitry ny fiadidiana ny Repoblika. Maro ankehitriny ny mampifangaro tsy satry an’i Lova Ranoromaro Hasinirina, talen’ny kabinetra vaovao, ho « première dame ». Ny antony dia eo akaikin’ny filoha Andry Rajoelina hatrany izy tato ho ato amin’izay mety ho fivoahana ampahibemaso. Izy rahateo dia misy itovitovizana amin’ny vadin’ny filoham-pirenena ny endriny sy ny vatany. Efa betsaka ny fanamarihana fa vehivavy avokoa no manodidina ny filoha ao an-dapa ao ary nalaza aza ny hoe miady an-trano izy ireo.
# Tena mibahana tanteraka ao an-tsain’ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny ekipany fa tsy izy ireo no tompon’antoka tamin’ilay olan’ny bakalorea. Nisy nanao fanahy iniana nanakorontana iny fanadinana iny, hoy izy ireo. Tsy manaiky ho diso mihitsy ny minisitera momba ity raharaha ity raha ny fomba fanazavan’ny sekretera jeneraly satria niniana natao iny fa tsy olan’ny fandaminana avy amin’izy ireo. Mikasa ny hanome sazy faran’izay haingana ho an’ireo nahavanona iny fanakorontanana ny minisitera. Tsy hisy eto amintsika mihitsy izany hoe rehefa tsy mahavita dia mametra-pialàna.
# Governemanta tsy mba miray hina ny mpikambana ao anatiny rehefa misy ny tsy fetezana eo amin’ny minisitera iray. Hita taratra izany tamin’ity raharaha bakalorea izay nahasaringotra ny minisitry ny fampianarana ambony. Tsy mba nisy nitsangana nanohana azy ny minisitra sasany fa dia navela tao anaty ny tsy fanomezam-baovao sy fitoniana ireo mpianatra. Velon-taraina ireo ray aman dreny noho ny nataon’ny fanjakana satria toa tsy nomena lanja mihitsy ary toa odian-tsy hita ny olana izay olam-pirenena anefa. Ny minisitry ny serasera no nasaina niteny tamin’ny onjam-peo ary dia mbola nasesiny tao indray fa fanakorontana no nitranga fa kosa tsy fahaizan-draharaha.